Wiil Yar Oo Soomaali ah ayaa Noqday Xaajiga Ugu Da’da Yaraa Xujeyda Sannadkan Oo Qaliin Lagu Sameeyey -
[ January 22, 2020 ] Dhalinyaro Soomaali ah Oo lagu xiray Magaalda Nairobi.	Wararka
[ January 22, 2020 ] Musharaxiinta madaxweynaha Galmudug Oo qaadacay doorashada	Wararka
[ January 21, 2020 ] Sirdoonka Soomaaliya Oo Gacanta Ku Dhigay Fanaan sheegtay inuu ka tirsan yahay Al-Shabaab	Wararka
HomeWararkaWiil Yar Oo Soomaali ah ayaa Noqday Xaajiga Ugu Da’da Yaraa Xujeyda Sannadkan Oo Qaliin Lagu Sameeyey
Wiil Yar Oo Soomaali ah ayaa Noqday Xaajiga Ugu Da’da Yaraa Xujeyda Sannadkan Oo Qaliin Lagu Sameeyey
August 12, 2019 F.G Wararka 0
Wiil Soomaali oo lagu magacaabo C/llaahi Maxamuud oo 4-jir ah ayaa noqday Xaajigii ugu da’da yaraa ee soo xajiyey Xajka sannadkan 1440-Hijriyah, sida ay shaaciyeen Warbaahinta Sacuudiga.
Xaajiga yar oo la xajinayey Hooyadiisa ayaa yara xanuunsaday, iyadoo uu naqaska ku dhegay, waxaana loola cararay Xarunta Umul Qur’a ee Wadnaha ee Isbitaalka khaaska u ah Carruurta oo ku yaalla magaalladda Maka Al-mukarama.
Baaritaan kadib, waxaa lagu sameeyey Qaliin dhinaca Wadnaha, sida ay Wasaaradda Caafimaadka Sacuudiga shaacisay.
Hadal ka soo baxay Wasaaradda Caafimaadka ee Sacuudiga ayaa lagu sheegay inuu ilmaha yar la xanuunsanaa cuddur ku dhaca wadnaha oo xaallad naadir ah, taasi oo 8 qof laga helo kun xaalladood ee Wadna-xanuunka.
Waxaana lagu sameeyey Qaliin dhanka Wadnaha, iyadoo ay Dhakhaatiirtu sheegeen inay xaalladiisa aad u soo hagaagtay.
Mar sii horreysay Warbaahinta dalkaasi waxay sheegeen in Xaajiga Yar ee Soomaaliga uu ku xanuunsaday Tendho ay ka deganaayeen Banka Carfo, kadib, markii uu dhibaato kala kulmay dhanka Neefsashadda oo uu naqasku ku dhegay.
Waxaana Xaajiga Yar lagu qaaday Ambalaas, iyadoo lagu xiray Qalabka Oksijiinta ee Bukaanka ka saacida dhanka Neefsashadda.
Dhinaca kale, Xaaji kale oo Soomaali ah oo lagu magacaabo Cabdulle Nuur oo da’da 50-aadka ku jiray ayaa waxa uu isagana ka mid ahaa boqolaalkii Xujeyda ee la dhigay Isbitaalladda, si loogu daaweyo xanuuno ku soo booday inta ay xajinyeen ama ay kuwo ay horey Bukaan Socod la ahaayeen.
Xaaji C/lle Nuur oo ka xanuunsanaa Wadnaha ayaa waxaa u gurmaday shaqaale ka tirsan Wasaaradda Caafimaadka ee Sacuudiga ee u xil saaran U-gargaarida Xujeyda, waxaana la dhigay Isbitaalka Takhasusiga ee dhanka Wadnaha.
Xaaji C/lle Nuur ayaa waxaa la filayaa in lagu sameeyo Qaliin dhanka Wadnaha, marka uu dhamaysto gudashada Waajibaadka Xajka.
Xujeyda la dhigay Isbitaalladda waxay ka soo kala jeedaan Waddamo fara badan, waxaana xanuunka ugu badan ee Xujeyda sannadkan laga daweeyey ahaayeen Wadno-xanuun, Macaanka, Dhiig Karka, Cudduradda Neef-mareenka siiba Naqaska , Suuxitaan ka dhashay Heer kulka Qorraxda iyo wixii la mid ah.
Hawlaha Adeegga Caafimaadka ee Xujeyda ayaa ahaa mid lacag la’aan ah, iyadoo ay Dhakhaatiir Takhasus leh iyo Kalkaaliyayaal Caafimaad diyaar u ahaayeen inay la tacaalaan Xujeyda faraha badan ee xanuunsaday.
Isbitaalladda loogu talagalay Xujeyda ayaa ahaa kuwa ay yaallaan Qalab Casri ah, isla markaana Bukaan kasta oo Xaaji lagu daaweynayo, iyadoo la siinayo Daryeelka ugu sarreeya ee dhinaca Daawada iyo Daaweynta.